Ukudayiswa kukagwayi notshwala kungenzeka kuvalwe unyaka wonke
KUNGENZEKA ukuthi ukudayiswa kukagwayi kuze kuvunyelwe ngonyaka ozayo uma kusenomcabango wokuthi ugwayi unomthelela ekubhebhethekeni kweCovid-19 Isithombe:African News Agency (ANA)
ISIKHULU seFree Market Foundation, uMnuz Leon Louw, sithi abantu bakuleli abangalindeli ukuthi ukudayiswa kukagwayi notshwala yinto ezokwenzeka kulo nyaka.
Uthi kungenzeka ukuthi lezi zinto zize zidayiswe ngonyaka ozayo uma ubheka indlela iCovid-19 ebhebhetheka ngayo, nokuthi leli gciwane lisazoqhubeka nokuthi libe khona.
Uze wathi ababhemayo kungalindeleka nokuthi bagcine bethenga iluzi ngoR20 noma ngoR200 ibhokisi kulabo abadayisa ugwayi ngokungekho emthethweni.
"Kunezinkomba zokuthi ukudayiswa kukagwayi akukazovunyelwa noma ngabe izwe selingena esigabeni sesithathu sikathaqa, ngisho sesifike nasesigabeni sokuqala,"usho kanje.
Uthe nokho kucacile ukuthi ukuvalwa kokudayiswa kukagwayi kunemithelela uhulumeni abangazimiselanga ngayo.
"Kusukela ngo-Ephreli, uhulumeni uselahlekelwe wuR300 million okhokhwa abadayisa ugwayi. Abadayisaugwayi ngokungemthetho bayazitamuzela nje ekudayiseni ngoba yinqwaba yabantu abafuna ugwayi, futhi bakwazi nokubiza imali eshisiwe," egcizelela.
"Ikusasa lemboni edayisa ugwayi ngokusemthethweni libukeka limfiliba, nakulabo abaziphilisa ngokuhambe bedayisa amaluzi. Ukudayiswa kukagwayi ngokungekho emthethweni kudle iNingizimu Afrika ngaphezu kukaR40 billion kusukela ngo2010".
Lesi sikhulu sishaya amakhala ngobuqiniso bokuthi ugwayi unomthelela ekubhebhethekeni kweCovid-19.
"Buphi ngempela ubufakazi bokuthi ugwayi ubhebhethekisa ukusabalala kweCovid-19. Kungani vele ugwayi ukhishwa inyumbazana kukhona nezinto ezifana nokudla, iziphuzo namathoyilethe omphakathi? Kungani kungavalwa nokudayiswa kukashukela ngoba bukhona ubufakazi obukhomba ukuthi abantu abanesifo sikashukela basemathubeni aphindiwe okungenwa yiCovid-19,"kubuza lesi sikhulu.
Ucwaningo lwakamuva olwenziwe yinyuvesi yaseCape Town,i-UCT's Research Unit mayelana nemikhiqizo uhulumeni aye aphoqe kuzo ukuthi kube nentela ekhokhwayo, luveze ukuthi inqwaba yabantu ababhemayo bebekwazi ukuzitholela ugwayi yize izwe belivaliwe, ugwayi ungadayiswa.
INingizimu Afrika ingelinye lamazwe amathathu akhethe ukuvala ukudayiswa kukagwayi ngalesi sikhathi seCovid-19. IBotswana ne-India nayo ikuvalile ukudayiswa kukagwayi.
ULouw uthe ngisho inhlangano yezempilo emhlabeni, iWorld Health Organisation ayikaze iveze ubufakazi obukhomba ukuthi ukudayiswa kukagwayi kunomthelela ekubhebhethekeni kweCovid-19.